बीबीएस पूरा गरेकी लजिना सरकारी गाडी हुइँक्याउँदै फिचर१३ वैशाख २०७७
सम्झिन्नँ भन्दा पनि सम्झनुपर्छ १२ वैशाख उनको आधा शरीर पुरिएपछि कराइन्, चिच्याइन् । तर, कसैले सुनेन । उनी भन्छिन्, ‘सबै मरेछन् जस्तो लाग्यो । जिउँदा भए त कोही न कोही आउँथे होलान् । सबै सकिएछन् जस्तो लाग्यो' फिचर . समाचार१२ वैशाख २०७७
विनाशकारी भूकम्प : सयौँलाई संरक्षण दिने जानकी मन्दिर भूकम्प आएपछि जनकपुरधामका सयौँ व्यक्तिले परिवारसहित घर छाडेका थिए । अधिकांश जानकी मन्दिरको प्राङ्गण र त्यसको वरिपरि सुतेका थिए । रातभर मन्दिरमा मेलाको महोल थियो फिचर१२ वैशाख २०७७
भूकम्पले अत्याएका ती कहालीलाग्दा ७ दिन पक्की घरहरू पनि ढल्न थाले । पहाड मच्चिरहेको छ । बीचमा मान्छेहरूको आर्तनाद, भागाभाग, कोलाहल । हेर्दाहेर्दै वरिपरि रक्ताम्य । कतिले ‘ऐया’समेत भन्न पाएनन् । कति मान्छेहरूले अन्तिम सास त्यहीँ फेरे । एकैछिनमा तातोपानी रणभूमि जस्तै बन्यो फिचर१२ वैशाख २०७७
‘आन्दोलनको बलमा दलहरू सत्तामा पुगे, घाइते-अपाङ्गलाई बिर्सिए’ सभागृह चोक र लेखनाथको तालचोकमा प्रहरीले लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र गोली नै चलायो । सभागृह चोकमा चलाएको गोली लागेर पोखरा महानगरपालिका- ८ की पार्वती पौडेल घाइते भइन् भने तालचोकमा चलाएको गोली लागेर स्थानीय मेघराज आचार्य घाइते भए । पौडेललको खुट्टा र आचार्यको छातीमा गोली लाग्यो फिचर११ वैशाख २०७७
लोकतन्त्रले संघीयताबाहेक मधेसीलाई के दियो ? यथास्थितिमा रहेर समाजमा परिवर्तन आउन नसक्ने सबैको गुनासो छ । त्यसो भए के अब फेरि आन्दोलनमै जाने त ? राजनीतिक विश्लेषक डा. लाभ भभन्छन्, ‘अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै यसको विकल्प हो । देशले प्रत्येक ५-७ वर्षमा एउटा आन्दोलन खेपिरहेको छ । कहिलेसम्म देशले यस्तो पीडा व्यहोरिरहने त ?’ फिचर११ वैशाख २०७७
लोकतन्त्रका लागि आँखा गुमाएका अञ्जन भन्छन् : ‘सरकार ! विगत नभुल’ ‘नेताले आफू र आफ्ना आसेपासेलाई मात्र हेरे । जनता जहाँको त्यहीँ छन् । अहिलेको राजनीति देख्दा पनि वाक्क लाग्छ’ फिचर११ वैशाख २०७७
माछापालनबाटै वर्षमा अर्बौंको कारोबार, कारोडौँ नाफा उनले माछा मात्र नभएर माछाका भुराहरू पनि बेच्दै आएका छन् । भुरा उनले प्रति गोटा ५ रुपैयाँका दरले बेच्दै आएका छन् । राईले अब लगानी पाएको खण्डमा वार्षिक ५० हजार किलो माछाबाट १५ लाख र भुराबाट ५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छन् फिचर . उद्योग९ वैशाख २०७७
अपाङ्ग अस्पताल गाउँमा कोरोना कहर : चामल सकियो अब के खाने ? 'एकपल्ट टिचिङ हस्पिटलसम्म पुगेँ । नजिकै एउटी आमाले चामलको बोरा घरसम्म पुर्‍याइदेउ १०० रुपैयाँ दिन्छु भनिन्,' उनी आफ्ना नमीठा अनुभव सुनाउँछन्, 'हातखुटा काम्छ त्यसैले बोकेको थिइन । सक्दिन थिएँ । तर, पेट भोको हुँदा कहाँ मान्दो रहेछ र, हुन्छ भनेर बोक्न लाग्दा ती आमा भयो भयो नछोउ भन्दै कराउन थालिन् ।' फिचर . समाज९ वैशाख २०७७
क्यान्सरलाई जित्दै ५ वर्षमा उद्यमी बनेकी सीता ‘जमरा त ठूलो औषधि रहेछ, हामी भने शिरमा सजाएर मात्र बसिरह्यौँ ।’ जमराको जुसले स्वस्थ पनि भएँ, अनि पछि यही जमराकाे उद्यमी पनि' फिचर . उद्योग . समाज८ वैशाख २०७७
लकडाउनको अवज्ञा गर्दै जनकपुरमा एकाबिहानै मानिसको भीड (फोटोफिचर) जनकपुरधाममा लकडाउनको अवज्ञा गर्दै आज बिहानैदेखि तरकारी बजारमा ठूलो भीड लागेको छ । सामाजिक दूरीको कुनै पालना नगर्दै तरकारी बजारमा मानिसको ठूलो भीड लागेको हो । फिचर . समाचार४ वैशाख २०७७
कोरोना संक्रमित युवा भन्छन्ः ज्वरो आउँदैन, खोकी पनि लाग्दैन, कसरी कोरोना भयो ? ‘सबै जना कुराकानी गर्छौं । दिन त बिताउनै पर्‍यो । चित्त पनि बुझ्छ । समय कटाउन हिन्दी फिल्म हेर्छु नेपाली त्यति बुझ्दिनँ । समय कटाउन हुन्छ’ फिचर . स्वास्थ्य३ वैशाख २०७७
किटाणु र भाइरस नष्ट गर्ने लाउन्ड्री लाउन्ड्रीले धेरै रोग निको बनाउँछ । मेसिन अटोमेटिक चल्छ । ६० देखि ९० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा धुन्छौँ । लुगामा भएको भाइरस, किटाणु सबै नष्ट हुन्छ ।' फिचर . स्वास्थ्य . समाचार२ वैशाख २०७७
कोरोना कहरसँग लड्दै अमेरिकामा नेपाली नर्स पेसा नै यही रोजेपछि डरउनु त भएन नि ! कसैले न कसैले त त गर्नै पर्थ्याे । जो मैले गर्ने अवसर पाएकी छु । यस्तो संकटको समयमा पनि आफूले सेवा गर्न पाउनु त राम्रो होइन र ? फिचर . स्वास्थ्य१ वैशाख २०७७
बल्बपेनमा देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्याेगी जोशीको जोस ती कलममा त्यस्तो के छ, जसले सबैलाई आकर्षित गरिरहेको छ ? अनि हामीले दिनहुँ प्रयोग गरेजस्तै देखिने बल्बपेन बोकेर आइडिया स्टुडियोसम्म किन पुगे त जोशी ? फिचर . उद्योग३० चैत २०७६
यी जुत्ता र खाजा तपाईंका लागि सित्तैमा हाे ‘यो जुत्ता तपाईंहरूका लागि । तपाईं टाढा घरसम्म हिँडेर जाँदै हुनुहुन्छ र आवश्यक छ भने लगाएर जानुभए हुन्छ ।’ फिचर . समाचार३० चैत २०७६
काठमाडौंको तरकारी बजारमा मानिसकाे भीड (फोटो फिचर) काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अस्थायी तरकारी बजारमा मानिसको भीड लाग्न थालेको छ । फिचर३० चैत २०७६